KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Wariye Xalay lagu Dilay Gaalkacyo
Gaalkacyo (Keydmedia) - Koox hubeysan ayaa Xalay ku dishay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo Wariye Farxaan Jeemid Cabdulle oo u shaqeyn jiray Idaacadda Daljir.
Weriyaha waxaa dilay Labo nin oo wejiga qarsaday, kuwaas oo baxsaday markii ay falka dilka ah geysteen kaddib.
Farxaan ayaa la dilay xilli uu ku sii jeeday gurigiisa oo ku yalla xaafadda New Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Waa dilkii labaad oo Sanadkan gudihiisa Gaalkacyo loogu geysto Qof Weriye ahaa.
Sanadkan gudihiisa ayaa lagu dilay Soomaaliya ilaa 5 Wariyaal, oo lagu kala dilay Magaalooyinka Muqdisho, Galkacyo iyo Beledweyn.
Keydmedia.net - Xafiiska Gaalkacyo